Vikela i-HTML Site kusuka ku-Hackers Ukusebenzisa amathiphu asebenzayo kusuka ku-Semalt. Kuyinto Elula Njengo-ABC!
1. Gcina Zonke I-Software Ibuyekezwe
U-Artem Abgarian, iMenenja Ephumelele Yempumelelo Yekhasimende Semalt ,ukholelwa ngokuqinile ukuthi ukugcina isofthiwe yakho ibuyekeziwe kungenye yezinto ezibalulekile ezizosiza ukuvikela iwebhusayithi kusuka ekuhlaselweni kwe-hacker.Ezinye izinkampani zikhulula ama-patches avamile nezibuyekezo zokulungisa izimbungulu namaphutha kuma-plugin awo wangaphambilini. Ngokuqinisekisa ukuthi balungisa noma yikuphiizimbungulu nezimbobo kule khodi, lezi zinkampani zinciphisa ingozi yokuhlaselwa kwesofthiwe yabo. Ngakho-ke, uma nje isayithi liqinisekisa ukuthiinezinhlobo zamaphasiwedi zakamuva ezisekelayo, iqinisekiswa ngezici ezifanayo zokuphepha. Okufanayo kusebenza kubanikazi besayithi ukuthisebenzisa ama-plugin wesithathu. Omunye kufanele aqiniseke ukuthi alandelela izibuyekezo zawo futhi aqinisekise ukuthi ahlala abuyekezwa nganoma yisiphi isikhathi esisodwa. Isayithiumnikazi udinga ukususa noma yikuphi ama-plugin angasetshenzisiwe noma ayadingeka njengoba ekhonza njengendlela yokuhlala, abaduni abangayithola futhisebenzisa ukuhlasela.
2. Yakha izakhiwo zokuphepha ezungeze isayithi
Umzila wokuqala wokuzivikela kwiwebhusayithi yiWeb Application Firewall.Inhloso yalo ukuhlola noma iyiphi i-traffic engenayo bese ubeka ifulege noma yiziphi izicelo ezisolayo. Ekugcineni, isayithi ligcina lingakwazi ukuhlaselwa yi-cyberfuthi ugaxekile. Esikhathini esidlule, iWeb Application Firewalls yayisesimo semishini ye-hardware. Noma kunjalo, izinkampani zezokuphepha-njenge-a-service(SECaaS) baye basebenzisa ubuchwepheshe befu njengesindlela eshibhile sokuhlinzeka ngokuphepha kwewebhu, okwakutholakala ngaphambilini kuma-setups ezingeni lebhizinisi yedwa.Ngokwebuchwepheshe befu, noma iyiphi inkampani ingakwazi ukuqasha "i-Web Application Firewall" ngaphandle kokufaka izindleko ezengeziwe ezifana nokuzinikezelaiseva yokusingatha. Lezi zinsizakalo ze-plug-and-play zizenzekelayo izici ezenza izinqubo ezidingekayo egameni lomnikazi. LeziI-Web Application Firewalls esekelwe efwini igcwalisa ukungabi khona lapho omunye umhlinzeki wokusingatha ehluleka..
3. Shintshela ku-HTTPS
I-Hyper Text Protocol Yokuphepha i-protocol yokuxhumana evikelekile esetshenziselwa ukushintshanisaulwazi oluyimfihlo noma olubucayi. Ukusebenzisa isevisi ye-HTTPS ukwenza ukuxhumana phakathi kwewebhusayithi nesiphequluli kusho ukungeza okungeziweIsendlalelo sokubhala nge-Security Layer Security (TLS) noma i-Secure Sockets Layer (SSL). Kuyinto inzuzo eyengeziwe kumnikazi njengalokhoiwavikela emikhankaso yokuqapha, nakuwebhusayithi njengoba ibonisa abasebenzisi ukuthi ibhizinisi lizinikezela ekuvikeleni ulwazi lwabo.
Konke ukuthengiswa kwe-inthanethi kugijima ku-platform ye-HTTPS. Okusele kwewebhusayithi kungukuthiI-HTTP ngokuzenzakalelayo. Noma kunjalo, lokhu kungashintsha njengoba i-Google isanda kungezwa ukuthi bazoqala ukusebenzisa i-HTTPS njengesilinganiso sokusesha, okuzokwenzakusho ukuthi amawebhusayithi amaningi azokwenza ushintsho ngethemba lokuthuthukisa isimo sabo ku-SERP.
4. Sebenzisa Amaphasiwedi Aqinile futhi Uwashintshe njalo
Kukhona ukwanda okwesabekayo kwenani lokuhlaselwa okunamandla okusetshenziselwa abaduniukuze uzame ukuqagela amaphasiwedi womsebenzisi. Enye indlela yokuzivikela kulokhu kusetshenziswa amaphasiwedi aqinile futhi ayingqayizivele. Kubalulekileukuze lezi zici zisetshenziswe ku-admin, amaseva wewebhu, namaphasiwedi e-database. Omunye kufanele adale iphasiwedi esebenzisaizinhlamvu ezahlukene, okungenani izinhlamvu ezingu-12 ubude. Okokugcina, abasebenzisi badinga ukushintsha amaphasiwedi kumasayithi ahlukahlukene ukuqinisekisa ukuthi okubili kabilievikelekile. Amaphasiwedi aphikisiwe asebenza kangcono njengoba kwenza kube nzima kubaduni ukuthola amaphasiwedi ngemuva kokwenza ukuphulwa okuphumelelayo.
5. Yenza i-Admin Administrough To Spot
Abahlaseli bahlasela ama-sourceories ukuthola iminingwane ephathelene nesayithi. Ngokusebenzisaizikripthi ezishaya ngalolu datha, ukugxila kwabo ukuzama ukuzama ukungenisa amafolda aqukethe lapho ukunciphisa ukuphepha. Iwebhusayithiumnikazi kufanele aqiniseke ukuthi amagama asetshenziswa kulezi zincwadi aziwa kuphela kubaphathi bewebhu kuphela.